Rakuten nandefa ny azy cryptocurrency - Blockchain News
In 2016, ny Japoney e-varotra goavana nahazo Rakuten Bitcoin-Bitnet kitapom-batsy, izay efa teo aloha vola ao amin'ny, ary nikarakara ny blockchain-laboratoara. Ny iray amin'ireo zava-bita voalohany ity raharaham-barotra dia ny fandefasana ny azy manokana Rakuten Coin cryptocurrency, izay famindrana ny tombony Rakuten fandaharana Super manondro ny blockchain. Ny daty ny famoahana ny vaovao dia tsy mbola cryptocurrency fantatra.
Momba ny famoronana ny “tsy manam-petra vola” dia nanambara Tale Jeneralin'ny Hiroshi Rakuten Mikitani nandritra ny World Congress Mobile in Barcelona. Ny orinasa manantena fa izany dia hisarika kokoa ny mpanjifa manerana izao tontolo izao, fampihenana ny naniraka, anisan'izany ny eo amin'ny fifanakalozana ny vola. Saingy alohan'ny rehetra fanavaozana izany dia antsoina mba hahavelom-bolo indray ny tsy fivadihana Rakuten fandaharana, izay mpanjifa dia izao hihevitra toy ny “fandraisana anjara ho an'ny blockchain.”
Over 15 taona ny Super Points tombony fandaharana, mihoatra noho ny tapitrisa tapitrisa “Super-hevitra” Efa voalaza, izay mitovy amin'ny $ 9.1 lavitrisa, ary ankehitriny ireo mpampiasa dia hanana fahafahana bebe kokoa hampihatra ny tahiriny. Rakuten Coin dia nikasa ho nampahafantarina ny orinasa rehetra ny sampany, ao anatin'izany ny sehatra ara-barotra frantsay PriceMinister, izay rebranded amin'izao fotoana izao ary ho anarana Rakuten, ary ny Amerikana service Cashback Ebates, nahazo ny orinasa ho an'ny $ 1 lavitrisa in 2014.
Mikitani nanindry fa Rakuten “dia tena tsy mitovy amin'ny Amazon”: “Ny asany dia ny mahary indray ny tambajotra ny varotra orinasa. Tsy te-hanesorana azy ireo avy amin'ny mpanjifa, fa, mifanohitra amin'izay aza, miezaka ny ho nampipoaka. Ny filozofia dia ny hanome fahefana eo an-tànan'ny fiaraha-monina, fa tsy ara-nofo fotsiny mba hanome tombontsoa. ” Ary amin'ny orinasa naoty izay “olona mila zavatra sasany izay tsy azo nahazo na aiza na aiza-kafa”. Fa tao amin'ny tsena Japoney Rakuten mampiray momba 44,000 fivarotana, miisa an'arivony tapitrisa ireo mpampiasa manerana izao tontolo izao, ary ny fidiram-bola ny orinasa ho an'ny 2017 dia $ 8.8 lavitrisa.
Nandritra ny kabariny tao amin'ny Mobile World Congress, Mikitani nilaza momba ny drafitra hafa ny orinasa. Manokana, mba hanitarana bebe kokoa ny tsy fivadihana fandaharam-, Rakuten manantena ho lasa-draharahan'ny mpandraharaha finday ary miomana mba hampiharana ny mifanaraka fampiharana ny Minisitry ny Atitany sy ny Serasera ny Japana (satria 2014, Rakuten dia virtoaly finday mpandraharaha eo ambanin'ny marika Rakuten Mobile). koa, ny fanompoana dia hampitombo ny asa amin'ny iraka manokana Viber, izay efa manana arivo tapitrisa ankehitriny ireo mpampiasa voasoratra anarana. Angamba ny zava-nitranga ny famoronana manokana sy ny cryptocurrency blockchain dia nafindra tany amin'ny iraka. Mandinika ny drafitra toy izany koa ny telegrama, tsy ho ela ny tena ara-bola, dia aza tsena banky, fa iraka avy hatrany.
Previous Post:Ny fanombohana ny LitePay tsy hatao ny andro voatondro
Next Post:Ahoana no mba hahazoana ny intraday cryptotrading?